စွမ်းရည်-Chuanghe စရာမင။၊ လုပ္င
Chuanghe's factory is located in Dalang town, According to machine functions, our factory is divided intoacold headed screw department,acold headed nut department,aCNC automatic workshop and other departments. We can independently manufacture high precision fastening pieces out of different materials, structures and specifications. All key equipments are imported from Taiwan and Japan to ensure an excellent performance. The processing equipment undergoes monthly maintenance, thus ensuring the service life and stable performance of all equipment.
အရည်အသွေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုချင်းစီသည်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက်၊ CHE သည်ကုန်ကြမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှအပြီးသတ်ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းအထိလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ရန်အထူးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စစ်ဆေးရေး ၀ န်ထမ်းများအသုံးပြုသည်။
Chuanghe Fastener သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ DongGuan မြို့ရှိမော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ CNC အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဝက်အူ၊ ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 နှင့်အထူးသဖြင့် aotumoilbe စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် IATF16949: 2009 လက်မှတ်နှင့်အတူ။
TIMELY COMMUNICATION CHE တွင်ဘာသာစကားမျိုးစုံသော ၀ န်ထမ်းများပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက်၎င်းတို့သည်အရောင်း ၀ င်ရောက်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူမှုနောက်သို့လိုက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အရည်အသွေးအာမခံချက်အမှာစာထုတ်လုပ်မှု၏တိကျမှုနှင့်အချိန်ကိုက်မှုကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှာစာထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန် ERP စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ CHE သည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး စွဲဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေနေပါသလား CHE သည်သင့်အားမည်သို့ကူညီသည်ကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
© 2019 Chuanghe Fastener Co. , ltd အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်
E-mail ကို:[အီးမေးလျ protected]